China emanzi mica powder ifektri kanye nabaphakeli | I-Huajing
I-Huajing plastic-grade mica powder, esetshenziselwa ikakhulukazi amapulasitiki obunjiniyela ukukhulisa i-module yokugoba nokuguquguquka; Emkhakheni wezesekeli zepulasitiki zemikhiqizo ye-elekthronikhi, ngemuva kokungeza i-mica, ingahlanganiswa ngokuhlanjululwa ngokwengeziwe nomklamo. ingathuthukisa ukumelana nesimo sezulu kwemikhiqizo yepulasitiki, ukuze amapulasitiki obunjiniyela akwazi ukumelana nokushisa okukhulu nokwehluka kwemvelo;
I-Wet Mica (Izinto Ezisebenzayo)
I-Wet Mica Material Izinto Ezisebenzayo）
W-100 USilver White ＞ 82 125 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.22
W-200 USilver White ＞ 82 70 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.19
U-W-400 USilver White ＞ 83 46 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.16
W-600 USilver White ＞ 86 23 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.12
Umsebenzi Omkhulu We-Mica
I-Huajing plastic-grade mica powder, esetshenziselwa ikakhulukazi amapulasitiki obunjiniyela ukukhulisa i-module yokugoba nokuguquguquka; Emkhakheni wezesekeli zepulasitiki zemikhiqizo ye-elekthronikhi, ngemuva kokungeza i-mica, ingahlanganiswa ngokuhlanjululwa ngokwengeziwe nomklamo. ingathuthukisa ukumelana nesimo sezulu kwemikhiqizo yepulasitiki, ukuze amapulasitiki obunjiniyela akwazi ukumelana nokushisa okukhulu nokwehluka kwemvelo; ithuthukisa kakhulu ukwahlukanisa ukuqinisekisa ukuthembeka kokusebenza kwamandla kagesi aphezulu; Kungathuthukisa uketshezi kweminye imikhiqizo ethile yepulasitiki.
Umhlabathi omanzi we-mica powder usetshenziselwa ukuhlanza izinto zokusetshenziswa ngamanzi futhi ugaye ngamanzi njengokuphakathi, ngakho-ke umhlabathi omanzi ompuphu unezimfanelo ezinhle kakhulu kunempuphu eyomile, njengobumhlophe obuhle, indawo ebushelelezi, ukuminyana okuncane kwenqwaba, umumo ojwayelekile, ububanzi obukhulu -to-thickness ratio nokunye.
Ukusetshenziswa kweMica ku-HDPE
Ukwengezwa kwe-mica ku-HDPE kunganciphisa nokutholakala kwezinto, ngakho-ke kufanelekile ukwenza zonke izinhlobo zeziqukathi, njengethangi likaphethiloli wemoto njalonjalo. Imodyuli ye-shear engeyona indiza yezinhlanganisela ze-HDPE / mica inyuka kakhulu ngokukhuphuka kwesilinganiso sesilinganiso samashidi we-mica, kuyilapho i-non-plane shear modulus incipha kancane. Izinhlanganisela ze-HDPE ezigcwele i-mica powder zinezinto ezingcono eziphelele zemishini. Ngokwanda kwenani le-mica powder, amandla e-tensile, amandla okugoba kanye ne-bending modulus yezinhlanganisela yanda.
Ukusetshenziswa kweMica Powder ku-ABS
I-ABS isetshenziswe kabanzi kwezimoto, ezokuxhumana, ezobuchwepheshe, ezokuvikela izwe nakweminye imikhakha. Ngemuva kokungeza i-mica kuma-plastiki wobunjiniyela be-ABS, ukuqina, ukugqoka ukumelana nokuqina kwamakhemikhali kwe-ABS kungathuthukiswa ngamazinga ahlukahlukene. Lapho i-30% mica ingezwa, uma iqhathaniswa ne-ABS emsulwa, izindleko zokukhiqiza zincishiswa cishe ngama-20%, futhi amandla okugoba namandla okuqina kwempahla athuthukiswa ngokuhlukile. Lapho okuqukethwe kwe-mica kungama-20%, imoduli yokugoba yento icishe iphindwe kabili kuneye-ABS emsulwa.